Shawaa Dhihaa - Wikipedia
Shawaan Dhihaa (Shawaa Lixaa jedhames ni waammama) godinaalee Oromiyaa 21 keessaa tokko. Shawaan Dhihaa karaa kibbaan godina Shawaa Kibba Lixaa fi Mootummaa Naannoo Kibbaan yoo daangeffamu, karaa kibba dhihaan godina Jimmaatin, karaa kaabaa dhihaa godina Wallagga Bahaa, karaa kaabaa Mootummaa Naannoo Amaaraatiin, karaa kaaba bahaa godina Shawaa Kaabaatiin, karaa kibba bahaa ammo godina Shawaa Kibba Lixaatin daangeffama. Iddoo ol ka’aa inni guddaan Tulluu Wancii (meetira 3385) yoo ta’u tulloonni ol ka’oon kaan Tulluu Mannaaggashaa fi Tulluu Wacacaa ti. Magaalonni godina kana keessa jiran Ambo, Hoolota, Giincii, fi Geedoofaa dabalata.
Bara 2002 hanga 2005tti aanoleen baayyeen godina Shawaa Dhihaarraa citanii godina Shawaa Kibba Lixaa uuman.
Wa’ee Ummataa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Akka lakkoofsa ummata bara 2007 Abbaa Taayitaa Istaatistiksii Itoophiyaatin godhameetti, godinni Shawaa Dhihaa ummata 2,058,676 kan qabu yoo ta’u kana keessaa 1,028,501 dhiira 1,030,175 immoo dubartoota. Godinni kun ballina iskuweer kiilomeetirii 14,788.78 yoo qabaatu, tuuta’insa ummataa 139.21 qaba. Ummata godina kanaa keessa 6.10% (242,352) magaalaa keessa kan jiraatan yoo ta’u kan hafe baadiyyaa jiraata. Godina kana keessatti abbootii warraa 428, 689tu aragama; kanaan abbaan warraa tokko avreejidhaan nama 4.80 qaba.
Saboonni gurguddaan 3 godina keessa jiraatan Oromoo(89.78%), Amaara(6.66%), fi Guraagee(1.73%); saboonni kaan walumatti 1.83% ta’u. Afaan Oromoo ummata 89.47% akka afaan jalqabaatti kan dubbatan yoo ta’u, 7.32% Amaariffaa, akkasumas 1.16% Sabat Bet Guraagee dubbatu. Ummanni baayyeen amantii Ortodoksii akka hodofan kan dubbatan yoo ta’u, isaan dhibbantaa 80.6% ta’u, dhibbantaan 7% amantii aadaa akka hordofan, dhibbantaan 6.58% Piroteestaantii, fi dhibbantaan 5.34% Musliima ta’uu isaanii dubbatan.
Akka meemoraandamii Baankii Addunyaa Caamsaa 24, 2004tti, ummatni godina kanaa dhibbantaa 35% eleektriikii kan argatan yoo ta’u, tuuta’insa karaa(road density) iskuweer kiilomeetirii 1000f kiilometirii 29.2 qaba (avireejjiin biyyatti kiiloomeetirii 30). Ummatni baadiyyaa avireejjidhaan lafa heektaara 1.4 qaba (avireejjiin biyyatti heektaara 1.01 yoo ta’u, kan Oromiyaa ammo heektaara 1.14). Namoonnii 31.8% ta’an hojii qonnaan alaa irratti bobba’an, avireejjiin biyyattii 25% kan Oromiyaa ammo 24%. Barumsa ilaallatee, ijollee umuriin isaanii mana barumsaatiif ga’ee keessaa sadarkaa tokkoffaarratti dhibbantaa 66% kan barumsarra jiran yoo ta’u, sadarkaa lammaffaarratti dhibbantaa 28%. Karaa fayyaa, lafti godina kanaa 89% ta’u busaadhaan kan faallame. Memoraandamiin kun godina kana qabxii balaa gogiinsaa 406 kennaafi.
Gabaasa Shawaa Dhihaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Gabaasa Central Statistical Agency irra bara 1997 E.C. (2005 G.C.) akka ibsutti, godinni kun tilmaamaan baay'ina ummataa 3,294,232, yoo qabaatu kan keessaa 1,625,107 dhiiraa yoo ta'an kan hafan yookan immoo 1,669,125 immoo dubartoota dha. Baayyina ummataa olitti ibsame keessaa dhibbantaan 12.3 % yokan namni 403,776 badiyya alla jirrattu. Ballina lafa tilmamaan 21,551.98 square kilometers ta'u kessatti "density" (walitti-kufami) ummatta Shawaa dhihaa tilmamaan 152.85 people per square kilometer ta'a.
Akka meemoraandamii Baankii Addunyaa Caamsaa 24, 2004 ibsutti, dhibbantaan 35% jiraattota Shawaa dhihaa elektirikii ni fayyadamu, akkasumas rukkina karaa konkolatta godina kanaa iskuweer kiilomeetirii 1000f kiilomeetirii 29.2 yoo ta'u (kunis kan biyyaa kilomeetirii 30 wajjin yoo walitti madalaan) , akkasumas avireejjiin abbaa manaa baadiyyaa tokko hektaara lafa 1.4 (kunis hektaara lafa biyyaa 1.01 fi hektaara lafa Oromiyaa 1.14 wajjin yoo walitti madaalamu) , akkasumas avireejjiin abba mana baadiyyaa tokko mataan horii mana hanga 0.7 qaba. Dhibbantaa 31.8% ummatta, namoota qonna malee jiraatan yoo ta'an, kunis yoo kan biyya dhibbantaa 25% fi kan Oromiyaa 24% wajjin yoo walitti madaalan. Ijoollee barachuu danda'an keessaa dhibbantaan 66% mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti galmaa'anii argamu, akkasumas dhibbantaan 28% mana barumsa sadarka lammaffatti galam'ani argamu. Dhibbantaan 89% dhibbantaa kana busaaf banaa kan jiran yoo ta'an, tokkoleen waraanaa bana miti. Memorandamiin zonii kana balaan qillensa gogaa qabachun qabxii 406 kenaf.
Meettaan Roobii aanaa Meettaa Walqixxee jedhamuun iddoo lamatti kan hirame(Meettaa Roobii fi Meettaa Walqixxee) yemmuu ta'u Xiqur incinnii kan jedhamu immoo Dirree Incinnii jedhamee waamama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Shawaa_Dhihaa&oldid=37428" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 28 Amajjii 2022, sa'aa 12:06 irratti.